Fanakorontanana :: Mpiambina Filoha teo aloha nanao ampamoaka • AoRaha
Mivoatra ihany koa ny famotorana momba ny fanakorontanana nokasaina natao tamin’ny Fetim-pirenena farany teo. Miainga amin’ny fakàna am-bavany ny lehilahy iray mpiambina Filoham-pirenena teo aloha ny fivoahan’ny anarana sokajin’olona maro tamin’ity raharaha ity. Karazana ampamoaka mihitsy no nataony tamin’ny fanononana anarana manamboninahitra vitsivitsy sy tompon’andraikitra ambony iray teo aloha teto amin’ny firenena.
Fikasana hamono minisitra dimy am-perinasa talohan’ny Fetim-pirenena lasa teo no nahatrarana andian’olona maromaro, tamin’ny 23 jona lasa teo sy andro vitsy taorian’izay. Isan’ireo iry mpiambina Filoham-pirenena teo aloha iry.
Nanonona anarana manamboninahitra zandary kolonely sy lietnà ary manamboninahitra lefitra ho isan’ny mpiray tsikombakomba aminy tamin’izao raharaha fanakorontanana izao izy, miampy lehibena andrimpanjakana iray teo aloha sady mpitarika antoko politika, raha ny fanampim-baovao avy amin’ireo akaiky ny mpanao famotorana. Tsotra ny tetika saika natao, araka ny fantatra : nokendrena hovonoina andro vitsy talohan’ny fankalazana ny Fetim-pirenena ireo minisitra (Naotin’ny Fanoratana : ny Fiarovam-pirenena, ny Atitany, ny Filaminam-bahoaka, ny Serasera sy Kolontsaina ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria) indrindra ireo misahana ny fandriampahalemana sy ny filaminana mba hanaporofoana eo imason’izao tontolo izao fa izy ireo aza tsy maharo ny tenany.
Nokaramaina 60 tapitrisa ariary ireo lehilahy folo nikasa hamono minisitra. Nambaran’ireo mpanao famotorana fa « nandà avy hatrany ny fidirany ao anatin’izao raharaha izao io lehibena andrimpanjakana teo aloha rehefa tonga tany an-tranony ny mpanao famotorana, kanefa tsy mbola nampahafantarina taminy akory ny anton-dian’izy ireo ».
Tsiahivina fa naiditra amponja eny Tsiafahy miaraka amina voarohirohy telo lahy ity mpiambina Filoha teo aloha ity. Miatrika famotorana hatrany kosa ireo voasambotra hafa. Mbola misy ireo karohina.
Fisamborana tany Toamasina :: Jiolahy dimy lavon’ny polisy tao anatin’ny andro vitsy